ကြည့်မြင်တိုင်ဆိပ်ကမ်း | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Photography » ကြည့်မြင်တိုင်ဆိပ်ကမ်း
Posted by fatty on Jan 17, 2012 in Photography, Travel | 28 comments
ကိုယ်နေတဲ့ မြို့က တော်တော်လှမှန်းသိတော့တယ်ဗျာ
ကိုကင်းက ကြည့်မြင်တိုင်သား ကိုး ….
စိုင်လေး တစ်ကောင်အကြောင်း သိချင်လို့..
နောက်မှာ မက်စိပို့တော့မယ် …အာဟိ…
ရွှေတိုင်ကိုလွှမ်းစိတ်တွေဝေအောင်မလုပ်နဲ့လေ…နေညိုရင် လေပြိုလာမှာမို့ ….နေမညိုခင် …ပြန်လာမယ်ဗျို့.
ငှက်ပျောသီး တွေ မြင်ရပြန်တော့
ရဲဘော်ဂျီး ပေါက်ဖော် ကို သွားသတိရမိဒယ်ဗျာ
ငါ့လည်းအရက်နဲ့မြည်းဖို့ တစ်ဖီးလောက်ပို့လိုက်ဦးနော်…။ မောင်ပေ……….
ဦးဖက်တီး အကြံဦးသွားတယ် … ကျွန်မလဲ အဲဒီနေရာကို သွားရိုက်မလို့ ကြံစည်နေတာ … ကျောက်တော်ကြီးဘုရားပေါ်ကနေ နေ၀င်တာကို တစ်ခါစောင့်ရိုက်ဖူးတယ် … အပြင်မှာလှပေမယ့် ဓါတ်ပုံထဲမှာ မလှလို့ မတင်ဖြစ်ဘူး …
ဆည်းဆာက ရေနဲ့ လှေနဲ့မှ ပိုလှတယ် ….
“Sun Set” မမြင်ရတာ ကြာပေါ့။ ကိုဖက် ရေ ကျေးဇူးပါ။ :-)
အနော်နဲ့ ကရင်စိ လိုက်လာရင် ……
sun set ပုံကအရမ်းမိုက်တယ် ပုံတွေ အားလုံးလှပါတယ် ကျေးဇူးဗျာ
လေးဖက် မိုက်တယ်ဗျာ.. နေ၀င်ချိန်လေး တော်တော်လှတယ်.. လေးဖက်ရိုက်ချက်ပြင်းတယ်နော..
ဦးဖက်က ကင်မရာအသစ်ဝယ်ပြီးပြီဆိုတော့ ကြွားလုံးထုတ်နိုင်ပြီပေ့ါ။
(အမှန်က ကင်မရာထက် လူကတော်တာဖြစ်မှာပါ။)
ပုံတွေက..ပန်းချီကား တစ်ချပ်လို ဗျူးတီး ပါသည်ခင်ည
ပုံတွေကိုကြည့်ရင်း နစ်မျောသွားတာနဲ့ လှတယ်လို့ ပြောဘို့ မနည်းအားယူလိုက်ရပါတယ် ဦးဖက်ရေ
ဦးဖက် လက်စွမ်းက အတော်ထက်သဗျာ၊ Sunset ရိုက်ချက်လေးတွေက လှမှလှဗျ။
မြင်ကွင်းလေးတွေ မြင်တတ်တာကတော့ ဘယ်လိုပြောပြော ဆရာအဆင့် စစ်စစ်ကြီးပါ။
ငှက်ပျောခိုင်တွေ ကို သဘောကျတယ်။ အစိမ်းတွေ ဆိုတော့ ဆေးမဖြန်းရသေးဘူး ထင်တာပဲ.. အဲလို အနေအထားမျိုး အမှဲ့ခံပြီး စားချင်တယ်။
အခု ငှက်ပျောသီးတောင် ပုဆိုးကို ဓါတ်မြေသြဇာ ရည် စိမ်ပြီး ငှက်ပျောသီး ပတ်ပြီး တည ထားရင် မနက် အလုံးလှလှ ၀င်းဝင်း ဖြစ်တယ်။
ကိုဖက်တီးရေ လှတယ်ဗျာနော့။နေဝင်ချိန်ရှုခင်းလေးတွေ ရိုက်အုံးမယ်ဗျာ။
ငပလီရဲ့ နေဝင်ဆည်းဆာအလှပုံလေးတွေ တင်ပေးပါမယ်။
ညနေအလှဆည်းဆာ၊ လှေ၊ လှိုင်းကြက်ခွပ် လေးတွေကြည့်ရတာ ကြည်နူးစရာပါပဲ………
ငှက်ပျော်ခိုင်တွေနဲ့ တံတားပ်ါက ကုန်တင်ကုန်ချ၊ ဈေးသည်၊ ဈေးဝယ်တွေရဲ့ လျှပ်တပျက်ပုံလေးကလည်း ရသတစ်မျိုးပါပဲ………….
ဧရာဝတီတိုင်း ပုသိမ်၊ မအူပင်၊ မြောင်မြဘက်က ရွာတွေကနေတင်လာတဲ့ ငှက်ပျောသီးတွေထင်တယ်… ညဆိုရင် အဲ့ဒီမှာ သူငယ်ချင်းရဲ့ မအူပင်မြို့နယ်က ရွာတွေကနေ မော်တော်ဆိုက်ရင် လိုက်သွားတာ… လူတွေမှ ကြိတ်ကြိတ်တိုး အရမ်းစည်တယ်…
ဦးဖက်ရေ ဒီတနင်္ဂနွေနေ့ကဘဲ ကြည့်မြင်တိုင်အဲ့ဒိဆိပ်ကမ်းကနေ
ဒါကြောင့်ပြောကြတာ သတိမမူ ဂူမမြင်ဆိုတာ
အခုတော့ ဂူမမြင်တာမဟုတ်ဘူး အလှတရားကိုမမြင်တာ
အရင်တုန်းကတော့ အချိန်အားလျှင် ကမ်းနားမှာ ရေ၊မုန့်အစုံနဲ့ … စိတ်လွတ်ကိုယ်လွတ် သွားထိုင်ခဲ့ဖူးတယ် … ။ ပုံထဲကလို နေ၀င်ချိန်မျိုးလည်း တွေ့ခဲ့ဖူးပေမယ့် … စာမရေးသေးတဲ့အချိန်မို့ ဓါတ်ပုံရိုက်ရကောင်းမှန်းမသိဘူးလေ … အခုတော့….သွားထိုင်ချင်လျှင်တောင် မလွယ်ကူတော့ပါဘူး … အဲ့ဒီနေရာတွေ တံတိုင်းခတ်လိုက်ပြီ … ။
လေးဖက်ရေ .. တခြားနေရာတွေတော့မသိဘူး .. ကြည့်မြင်တိုင်ကမ်းပါးကိုတော့ သတိနဲ့ ထား သွားစေချင်တယ် … လေးပေါက်ဝင်ရိုက်ခဲ့တဲ့နေရာက ငှက်ပျောဈေးဘက်ခြမ်းဖြစ်မယ်ထင်တယ်နော့ …. ။
အထူးသဖြင့် ကုန်တင် ကုန်ချ အလုပ်သမား အများစု ခြေချင်းလိမ်တဲ့နေရာပါ …. ။ ပင်ပန်းမှုဒဏ်ကို အံတုဖို့ဆိုတဲ့ အကြောင်းပြချက် နေ့ည မခွဲပဲ … နဲ့ ရှက်ကီ ထုကြပါတယ် … ။ ကိုယ့်အရှိန်နဲ့ကိုယ်မှန်နေတဲ့ လူတွေ ရှိသလို …. မူးလျှင် သွေးဆိုးတတ်တဲ့ လူတွေလည်းရှိတယ် …. ။ တစ်ယောက်တည်း ဆိုးလို့က ပြသနာမရှိပေမယ့် …. ရန်စချင်တဲ့ လူတွေနဲ့ ကြုံတဲ့အခါ … စိတ်အနှောက်ယှက်ဖြစ်ရပါတယ် .. .. တစ်ခုခုဟေ့ဆို …. အသက်ပါပါနိုင်လောက်အောင် လက်မြန်တတ်ကြတယ် ……. ။
ကိုယ်တိုင်လည်း ကြုံဖူးတယ် …. ရန်စတာကို လှည့်ထွက်လာလို့ …. မသိချင်ယောင်ဆောင်ရမလားဆိုပြီး နောက်ကနေ ထင်းရူးပုံးနဲ့ ထုပြီးပြေးတာ …(လျှပ်ပဲထိလို့… ) ခေါင်းပေါက်ဖူးတယ် …. ။ လိုက်ဖမ်းတော့ …. မမိတော့ဘူး …. တည့်တည့်များထိလို့ ကတော့ … ဘယ်နှစ်ချက် ချုပ်ရမလဲ မတွေးရဲစရာပါပဲ …
အိတုံရဲ့ အိမ်ပေါ်ကနေလှမ်းရိုက်လို့တောင်ရမယ်ထင်တယ်…အနောက်ဘက်ခြမ်းက အေးရွှာကိုကောင်းကောင်းလှမ်းမြင်နိုင်ထင်တယ်..
ဒါပေတဲ့ကျနော်အရွယ်ကောင်းစဉ်က အဲလိုနေရာတွေမှာ ကျင်လည်ခဲ့ဖူးတယ်လေ ..
အော် … ဘ၀ .. ဘ၀ နှစ်လုံးထဲရှိပေလို့ဘဲ လေးငါး လုံးသာဆို တကယ်မလွယ်ပါလား ….။
အဲလိုနေရာတွေမှာ ကျနော်မိုးလင်းခဲ့တဲ့ညပေါင်း များစွာပါ …။